My carruurnimada aan waligood - Gabar, gooyey qayb lix | Apg29
My carruurnimada aan waligood - Gabar, gooyey qayb lix
Eeygu dayrka ahaa jirdil ii. guriga Behind, oo wuxuu lahaa oo uu Xadhig sidii uu dib u soo orday. Oo isna wuxuu diirteen ee qof walba iyo wax walba.
Oo kolkii aannu wada meel ka maqnayd, sida caadiga ah waxa uu ahaa in Ljungby in uu ahaa our magaalada, oo mar kale soo dhawaaday guriga si aan u arki kartaa in masaafada markii aannu degan on wadada wasakh eey dib ugu soo orday oo codkoodiina way noo ee.
Wuxuu diirteen habeenkii oo uu scolded maalmood. ugu xumaa waxay ahayd habeenkii marka aad isku dayayeen in ay hurdo. Haa, waxa uu ahaa xanuun ah, laakiin waxa uu sidoo kale ahaa eey ugaarsiga ah.
Waxaan u lahaa beret ah markii aan wax yar waxaan jeclaa aad u badan oo aan had iyo jeer soo xirtay madaxayga saaran jiray. Waxa ay aheyd casaan, laakiin on board a, halkaas oo Ingemar oo aan faras fadhiisan waa buluug.
Waxay ahayd artist ah kuwaas oo rinji ah sawiro madow iyo caddaan oo naga mid ah oo wax baan u buluug beret cas. Ingemar oo aan Labada helay sawirada kuwa. Laakiin beret noqon lahayd wax la soo dhaafay.
Marka eey ku booday ii on markii aan isaga soo dhawaaday markii uu dib u soo uu line orday. Wuxuu ku kor istaagay uu lugaha cawl iyo addinba ku riday on my xabadka si aan dib ugu riixay. Waxaan hoos aan beret cadaadis.
qabtay xoogaa eey The of my beret afkiisa weyn oo wuxuu u kala jeexjeexay burburin halka uu u qabtay si adag oo baabacooyinka hore. Qofna ma i weydiiyay meesha aan beret cas baxeen aan jeclaa aad u badan.
Waxaan deris la odhan jiray Gunnar. Wuxuu ahaa nin duq ah kuwaas oo ku noolaa on buuraha lahaa ee kor ku xusan dhowr boqol oo mitir naga. Waxa uu ku noolaa beer iyo guri dhacsan in Rune ka dib noqon doono milkiilaha in ka dib markii Gunnar ku dhinteen.
Gunnar ahaa nin dhanaan jir ah, laakiin dhab ahaan fiican, inkastoo aan kids ahaayeen wax yar ka baqaa isaga. Waxa uu badiyay dhawr farood oo hal gacan. Waxaa la sheegay in uu si qalad ah ku baabbi'in faas ku sameeyaan, laakiin anigu garan maayo.
Laakiinse waxaan jiray aga cabsi uu eyga weyn madow oo la socda dabacsan waxaa isaga la jiray oo way diirteen ee qof walba iyo wax walba. Waxa uu ahaa guri dhabta ah eyga.
U tageen inay mararka qaar la soo dhaafay guriga Gunnar si eey u yimid sababo Landes oo doonayay in ay ku boodaan on mid ka mid ah. Markii aan ahaa wax yar ka weyn oo fuuli kartaa bushkuleeti waxaan u soo dhaafay wareegga loo isticmaalo sida ugu dhakhsaha badan aan awoodo si eey u boodi lahaa ii on.
Our deriskiisa aabe Tony ee la odhan jiray Erik sidoo kale eey. Waxay ahayd dachshund oo ahaa eey ugaarsiga ah xitaa Erik ahaa ugaadhsade ku.
Rune loo isticmaalaa in lagu ugaadhsan dawaco iyo markii dachshund Eric ee ka soo ahaa iyo beeraha Rune maleeyey in ay ahayd dawaco orday, kiciyey qoriga iyo toogtay in la dilo. Markaasaa waxaa jiray deris weligiis dhamaaday.
On our beerta waxaa jira xoolo badan, waxaa jiray laba eeyaha, mid ka mid ah taasi oo markii dambe u yimid oo ku wareegsan orday in eey a intuu kan kale sii waday in ay ku ordi doonaa line, waxaa joogay fardo kale, lo'da, iyo weylaha, doofaarrada, shinbiraha, digaagga, berriga iyo bisadaha.
Dogs, anna waxaan leeyahay, sida waxaan is-idhi xusuusta xun ee, laakiin waxaan jeclaa bisadaha ma oga. Malaha waxaan iyaga u jeclaaday si aad u badan midkood. Si kastaba ha ahaatee, waqti dambe ee nolosha, Waxaan jeclaan lahaa dhibaato bisadaha.
Laakiin waxaan u qayshaday quusan mar marka aan ku dhacay maroojin in la dilo carabiyo markii aan ku dhow albaabka hore qaro weyn oo culus marka waxaan ahaa on my hab dugsiga. Waxaan arkay bisad isagoo Jiifa dib iyo ku dhibtooday addimmadiisa markii uu dagaal nolosha intuusan dhiman ayuu.
Markaas si dhab ah u qalbi qaboobi hooyaday foster ii hab xusuus by daqiiqad derejeeyo klapppa dhabannada i ahaayeen qoyan la daadan illin.
Laakiin "xoolo" xumaa ee beerta dhab ahaantii waan nacay oo dhammu waxay ahaayeen kuwa duqsigu karaahiyada agagaarka duulaya gudaha in boqolaal inta lagu jiro xagaaga. Yikes, waxa laga yaqyaqsado ay ahayd, gaar ahaan marka aad cuni kari.
Hooyaday foster dilay Daqsi ka dib markii dhoobnayd la Flapper, iyaga buufiyaa dhintay waxay noqotay badan oo duqsiyo dhintay dabaqa, dhegaysanayay flycatcher jaalaha ah ee saqafka in uu si deg deg ah ka buuxsamay by duqsigu madow, laakiin duqsigu weli miiqeen madaxayga ku wareegsan.
Xataa maantadan aan u dulqaadan karin duqsigu jirin. aad u badan oo ku saabsan carruurnimadii ka walbahaaray wuuna beerta dalka Waxay xasuusiyo.
Kattis Sat, 08 Sep 2018 12:48:57 +020
Bengt Sat, 08 Sep 2018 12:55:49 +020
Johan Sat, 08 Sep 2018 13:29:50 +020
Kattis Sat, 08 Sep 2018 14:13:11 +020
Bengt Sat, 08 Sep 2018 15:11:49 +020
Bengt Sat, 08 Sep 2018 15:11:53 +020
Bengt Sat, 08 Sep 2018 15:12:01 +020
Filosofen Sat, 08 Sep 2018 18:00:26 +020
Ann-Marie A. Sun, 09 Sep 2018 00:18:19 +020
Tror Sun, 09 Sep 2018 17:11:52 +020